FILE -- In this Thursday, Oct. 1, 2015 file photo an elephant crosses a road in the Hwange National Park, in Hwange, Zimbabwe. Zimbabwe’s wildlife agency said Thursday, Jan. 5, 2017 it has sold 35 elephants to China to ease overpopulation and raise funds for conservation, amid criticism from animal welfare activists that such sales are unethical. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) (The Associated Press)
FILE -- In this Thursday, Oct. 1, 2015 file photo an elephant crosses a road in the Hwange National Park, Zimbabwe. Zimbabwe’s wildlife agency said Thursday, Jan. 5, 2017 it has sold 35 elephants to China to ease overpopulation and raise funds for conservation, amid criticism from animal welfare activists that such sales are unethical. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) (The Associated Press)
Zimbabwe's wildlife agency said Thursday it has sold 35 elephants to China to ease overpopulation and raise funds for conservation, amid criticism from animal welfare activists that such sales are unethical.
The statement by Zimbabwe's wildlife agency said its conservation efforts have been affected by restrictions on selling the country's ivory stockpile and on trophy hunting of certain species.